सम्बन्धविच्छेद भएका साथीलाई कसरी मदत गर्ने? | अध्ययन
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उज्बेक उन्डुबेली उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डेनिश ड्रेहु तामिल ताहिटी तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मराठी मले मल्यालम माया मालागासी माल्टिज म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वलिसियन वारे-वारे वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
सम्बन्धविच्छेद भएका कसैलाई तपाईं चिन्नुहुन्छ कि? सम्बन्धविच्छेद गर्नेहरूको सङ्ख्या अकासिंदै छ। उदाहरणको लागि, पोल्याण्डको एउटा सर्वेक्षणले देखाएअनुसार ३० वर्ष पुगेका जोडीहरूमाझ विवाह भएको तीनदेखि छ वर्ष नबित्दै सम्बन्धविच्छेद गर्ने लहड चलेको छ। तर यस्तो समस्या कुनै खास उमेरका जोडीहरूमाझ मात्र सीमित छैन।
नेपालको एउटा स्थानीय पत्रिकाअनुसार ‘एक वर्षभित्र एउटा जिल्लामा मात्र ४७४ जोडीले सम्बन्धविच्छेदको लागि आवेदन दिए। तीमध्ये ३९९ जोडीको सम्बन्धविच्छेद भएको पाइयो।’
सम्बन्धविच्छेद हुनुका केही कारण के हुन्‌? पूर्वी युरोपमा बस्ने वैवाहिक जीवनका अनुभवी सल्लाहकार यसो भन्छिन्‌, “सम्बन्धविच्छेदले, जे भइसकेको छ त्यसलाई कानुनी मान्यता दिने मात्र हो; आपसी सम्बन्ध पहिल्यै बिग्रिसकेको हुन्छ र भावनात्मक उथलपुथल सुरु भइसकेको हुन्छ।” तिनी अझै यसो भन्छिन्‌, “पीडा दिने आँधी र चोट दिने बाढी आएझैं सम्बन्धविच्छेदपछि रिस, पछुतो, दिक्दारी, निराशा र लाजले भित्रभित्रै पोल्छ।” सम्बन्धविच्छेद गर्नेहरूलाई कहिलेकाहीं त झुन्डिएर मरौं कि जस्तो लाग्छ। उक्त सल्लाहकार यसो पनि भन्छिन्‌, “सम्बन्धविच्छेदको फैसलापछि जीवनको अर्को पाटो सुरु हुन्छ। एक्लोपन र छटपटीले सताउन थाल्दा सम्बन्धविच्छेद भएको व्यक्तिको मनमा ‘अब म एक्लो भएँ, बिलकुलै एक्लो, मेरो जीवनको के नै अर्थ छ र’ भन्ने तर्कना खेल्न थाल्छ।”
केही वर्षअघि आफूमाथि आइपरेको बज्रपातबारे लिना यसो भन्छिन्‌, “सम्बन्धविच्छेदको फैसलापछि मलाई असाध्यै लाज लाग्यो। छिमेकी र दौंतरीहरूले ‘लोग्नेले त्यागेकी आइमाई’ भन्लान्‌ कि भन्ने डरले सताउँथ्यो। भित्रभित्रै रिसको आगो दन्किरहन्थ्यो। दुई लालाबालाको पालनपोषण म एक्लैले गर्नुपऱ्यो।” * बाह्र वर्षसम्म एल्डरको रूपमा सेवा गरेका अनुप यसो भन्छन्‌, “मेरो आत्मसम्मानमा ठेस पुग्यो। कहिलेकाहीं त रिसले पागल हुन्थें। एकाकीपन नै मेरो साथी हुन थाल्यो।”
सन्तुलित हुन सङ्घर्ष
सम्बन्धविच्छेद भएकाहरूलाई भविष्यको चिन्ताले गाँज्छ। त्यसैले उनीहरू वर्षौंपछिसम्म पनि सन्तुलित हुन सङ्घर्ष गरिरहन्छन्‌। उनीहरू ‘अरूलाई मेरो वास्तै छैन’ भन्ने गर्छन्‌। अखबारमा वैवाहिक समस्याबारे लेख्ने एक व्यक्ति यसो भन्छन्‌, “तिनीहरूले आफ्नो जीवन बिताउने तरिका बदल्नुपर्छ र एक्लैले कामकुरा सम्हाल्न सिक्नुपर्छ।”
सुशील यसरी सम्झन्छन्‌, “सम्बन्धविच्छेदपछि मेरी श्रीमतीले दुई छोरीहरूलाई आफैसित लागिन्‌ र फेरि कहिल्यै भेट्न दिइनन्‌। कसैले मेरो चासो राख्दैन जस्तो लाग्यो। यहोवाले पनि त्याग्नुभएको हो कि जस्तो लाग्यो। बाँच्न पनि मन लागेन। तर मेरो सोचाइ कत्ति गलत रहेछ।” सम्बन्धविच्छेद गरेकी वृन्दालाई पनि आफ्नो भविष्य कस्तो हुने होला भन्ने चिन्ताले सतायो। उनी भन्छिन्‌, “केही समयपछि छोराछोरी र मलाई कसैले—सङ्गी विश्वासीहरूले समेत वास्ता गर्नेछैनन्‌ जस्तो लाग्न थाल्यो। तर म कत्ति गलत रहेछु! भाइबहिनीले एकजुट भएर छोराछोरी र मेरो हेरचाह गर्नुभयो। उहाँहरूको मदत पाएर छोराछोरीलाई यहोवाको उपासक बन्न मदत गर्न सकें।”
यस्ता भनाइबाट सम्बन्धविच्छेद गर्नेहरूको मनमा नकारात्मक सोचाइको आँधी चल्छ भनेर तपाईंले बुझिसक्नुभयो होला। ‘म केही कामको छैन। कसैले मेरो चिन्ता गर्दैन’ भन्ने सोचाइ उनीहरूको मनमा खेल्न सक्छ। अरूबारे पनि उनीहरूले नानाथरी सोच्न सक्छन्‌। ‘मण्डलीका भाइबहिनीले पनि मेरो दुःख बुझ्दैनन्‌; मलाई माया गर्दैनन्‌’ भनेर सोच्न थाल्छन्‌। तर सुशील र वृन्दाको अनुभवले देखाएजस्तै भाइबहिनीहरूले साँच्चै ख्याल राख्छन्‌ भनेर सम्बन्धविच्छेद भएकाहरूले पछि महसुस गर्न सक्छन्‌। हो, सम्बन्धविच्छेद भएकाहरूले सुरुमा त भाइबहिनीले दिएको मदत याद नगर्लान्‌। तर वास्तवमा सङ्गी ख्रीष्टियनहरू साँच्चै उनीहरूको ख्याल राख्छन्‌।
एकाकीपनले सताउँदा र त्यागिएको भावनाले पिरोल्दा
मदत दिन जतिसुकै कोसिस गरे पनि सम्बन्धविच्छेद भएका हाम्रा भाइबहिनीलाई समय-समयमा एकाकीपनले सताइहाल्छ। खासगरि सम्बन्धविच्छेद भएका बहिनीहरूलाई ‘कसैलाई पनि मेरो मतलब छैन’ भन्ने लाग्न सक्छ। अनुजा यसो भन्छिन्‌, “सम्बन्धविच्छेद भएको आठ वर्ष बितिसक्यो तर अझै पनि आफू केही कामको छैन जस्तो लागिरहन्छ। मलाई आफैमाथि दया लाग्छ र एक्लै बसेर रुन थाल्छु।”
हुन त सम्बन्धविच्छेद भएका सबैलाई नै एक्लोपनले सताउँछ तर बाइबलले अलग्गै नबस्न चेतावनी दिन्छ। यो चेतावनीलाई बेवास्ता गरेमा “विवेकपूर्ण सल्लाह”-लाई इन्कार गर्ने हदसम्म पुग्न केही बेर लाग्दैन। (हितो. १८:१, ERV) एक्लोपनले सताउँदा विपरीत लिङ्गका व्यक्तिबाट सल्लाह र सान्त्वना खोजिरहनु बुद्धिमानी होइन। यो कुरा मनमा राख्यौं भने अनुचित भावनाहरू पलाउने खतराबाट जोगिन सक्छौं।
सम्बन्धविच्छेद भएका सङ्गी भाइबहिनी भावनात्मक उथलपुथलको भुमरीमा परेका हुन सक्छन्‌। तिनीहरूलाई भविष्यको फिक्रीले सताइरहन्छ र एक्लो वा त्यागिएको महसुस हुन्छ। यस्तो भावना आउनु स्वाभाविक हो अनि यसलाई जित्न सजिलो छैन भन्ने कुरा मनमा राख्दै तिनीहरूलाई सहयोग गरेर हामीले यहोवाको देखासिकी गर्नुपर्छ। (भज. ५५:२२; १ पत्रु. ५:६, ७) हामीले गरेको सानोभन्दा सानो मदतको तिनीहरूले धेरै मोल गर्छन्‌ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क हुन सक्छौं। हो, यस्ता भाइबहिनीले मण्डलीभित्रै साँचो मित्रहरूबाट मदत पाउन सक्छन्‌।—हितो.१७:१७; १८:२४.
^ अनु.6केही नाम परिवर्तन गरिएका छन्‌।
सम्बन्धविच्छेदप्रति सन्तुलित दृष्टिकोण
यहोवाका सेवकहरू वैवाहिक सम्बन्धलाई गम्भीर रूपमा लिन्छन्‌। वैवाहिक सम्बन्धको विषयमा धर्मशास्त्रले भनेको कुरा हामी मनमा राख्छौं। मलाकी २:१६ मा परमेश्वरले स्पष्टसँग यसो भन्नुभएको छ, “स्वास्नीलाई त्याग्ने कुरालाई म घिन गर्दछु।” सम्बन्धविच्छेदको एउटा मात्र धर्मशास्त्रीय आधार अवैध यौनसम्बन्ध हो। त्यसैले कसैसित विवाह गर्ने सपना बुनेर आफ्नो पति वा पत्नीसित सम्बन्धविच्छेद गर्नेबारे सोच्नु मात्र पनि गम्भीर गल्ती हो।—उत्प. २:२२-२४; व्यव. ५:२१; मत्ती १९:४-६, ९.
अवफादार जोडीको कारण सम्बन्धविच्छेद हुँदा गाह्रो त पक्कै हुन्छ। तर मण्डलीका भाइबहिनीले साथ दिनेछन्‌। “टुटेका हृदय भएका” ती वफादार भाइबहिनीलाई सकेजति मदत गरेर हामी यहोवाको अनुकरण गर्न सक्छौं।—भज. ३४:१५, १८; यशै. ४१:१०.
कसरी मदत गर्न सक्नुहुन्छ?
यस लेखमा उल्लेख गरिएका भाइबहिनीले जस्तै भावनात्मक पीडा सहिरहेकाहरूलाई के तपाईं मदत गर्न सक्नुहुन्छ? तर कसरी मदत गर्ने? यस विषयमा बाइबल के भन्छ, विचार गर्नुहोस् अनि वफादार ख्रीष्टियनहरूले उनीहरूलाई कसरी मदत दिए, त्यो पनि याद गर्नुहोस्।
ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। (हितो. १६:२०, २३)
सम्बन्धविच्छेद भएकाहरूले सम्बन्ध टुट्नुको एक-एक कारण बताउन नचाहलान्‌। त्यसैले उनीहरूको मनको घाउ कोट्याउन खोज्दा त्यो झनै बल्झिन सक्छ। (हितो. १२:२५; रोमी १२:१५) मनोजले अगाडि उल्लेख गरिएका अनुपलाई मदतको हात बढाए। तिनी भन्छन्‌, ‘उनीहरूबारे सबै कुरा थाह पाउन नसकिए तापनि हामी दयालु हुँदै ध्यान दिएर सुन्न सक्छौं।’ तिनी अझै भन्छन्‌, ‘नकारात्मक भावनाले गाँजेको बेला मनमै नभएको कुरा पनि मुखबाट निस्कन सक्छ भनेर बुझ्न अनुपलाई मदत गरें।’ यसरी आफूले एक-एक कुरा खोतल्न नचाहेको कुरा मनोजले स्पष्ट पारे। हो, तिनले ध्यान दिई सुनेर साँचो साथी भएको देखाए। सभाअघि वा पछि त्यस्ता भाइबहिनीलाई भेटेर यत्ति मात्र भन्दा पनि उनीहरूले राहत पाउन सक्छन्‌, “तपाईंलाई कस्तो छ? अहिले तपाईंलाई गाह्रो भइरहेको छ भनेर मलाई थाह छ, तपाईंलाई जुनसुकै बेला मदत गर्न पनि म तयार छु।”
चासो देखाउनुहोस्। (फिलि. २:४)
मनिष सम्झन्छन्‌: “म र मेरी श्रीमतीले सम्बन्धविच्छेद भएकी बहिनीलाई मदत गर्न समय छुट्यायौं। हामीले उनको ढोकाको चुकुल बनाइदियौं। डाक्टरकोमा पनि लगिदियौं।” हेर्दा त यस्तो मदत साधारण देखिन्थ्यो। तर यो उनलाई चाहिएकै मदत थियो र उनले ठूलो राहत पाइन्‌। त्यस बहिनीले बिस्तारै आफूलाई सम्हाल्न सकिन्‌। त्यति मात्र होइन, पछि उनले अग्रगामी सेवा सुरु गरिन्‌ र ११ वर्षकी छोरीलाई बप्तिस्मा गर्न पनि मदत दिइन्‌।
यहोवाले परिस्थिति बुझ्नुहुन्छ भनेर सम्झाउनुहोस्
कसै कसैलाई आफू केही कामको छैन जस्तो लाग्न सक्छ। त्यस्ता भाइबहिनीलाई यहोवा उनीहरूको मोल गर्नुहुन्छ भनेर बुझ्न मदत गर्नुहोस्। हामी “थुप्रै भँगेराभन्दा पनि बहुमूल्य” छौं। (मत्ती १०:२९-३१) हो, यहोवाको नजरमा हामी बहुमूल्य छौं। “मानिसको मन जाँच गर्ने” यहोवाले सम्बन्धविच्छेद भएकाहरूको अवस्था राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ। (हितो. १७:३; भज. १४५:१८; हिब्रू १३:५) त्यसैले उनीहरूको सत्यप्रतिको प्रेम र यहोवाको सेवा गर्न उनीहरूले गरेको प्रयासको उहाँ मोल गर्नुहुन्छ भनेर सम्झाउनुहोस्।—फिलि. २:२९.
मण्डलीसँग नजिक हुन प्रोत्साहन दिनुहोस्।
भावनात्मक उथलपुथलले सताएको बेला कसै-कसैलाई सभा जान मन लाग्दैन। तर सभा जाँदा गाह्रो परिस्थिति सामना गर्न बल अनि साहस पाउन सकिन्छ। यी जमघटहरू हाम्रो “उत्थानको निम्ति” गरिएको प्रबन्ध हो। (१ कोरि. १४:२६; भज. १२२:१) यस्ता भाइबहिनीहरूलाई सभा आउन मदत दिन एल्डरहरू अग्रसर हुनुपर्छ। अगाडि उल्लेख गरिएकी वृन्दा भन्छिन्‌, “एल्डरहरूले देखाउनुभएको मायालु चासो हामी अहिले पनि सम्झन्छौं।”
प्रार्थना, व्यक्तिगत अध्ययन र मननद्वारा यहोवासितको सम्बन्ध बलियो बनाउन प्रोत्साहन दिनुहोस्। (याकू. ४:८)
यहोवा सर्वशक्तिमान्‌ हुनुहुन्छ र स्वर्गमा बस्नुहुन्छ। तैपनि ‘जो दीन र चूर्ण हृदयको छ, र उहाँको वचनमा काम्दछ,’ उनीहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धविच्छेद भएकाहरूलाई सम्झाउनुहोस्। साथै प्रार्थना अनि व्यक्तिगत अध्ययन गरेर हामी परमेश्वरको नजिक हुन सक्छौं भनेर जोड दिनुहोस्।—यशै. ६६:२.
सँगै प्रचार जाने वा सभाको तयारी गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुहोस्।
यसो गर्दा सम्बन्धविच्छेद भएका भाइबहिनीले पीडा सहँदै जीवनको यात्रामा हिंड्ने बल पाउँछन्‌। सुमिताले सम्बन्धविच्छेद भएकी एक बहिनीलाई मदत गरिन्‌। ती बहिनी निकै जोसिलो थिइन्‌ तर सम्बन्धविच्छेदको पीडाले तिनलाई साह्रै गाह्रो भइरहेको थियो। सुमिता यसो भन्छिन्‌: “हामी नियमित रूपमा सँगै प्रचार जान्छौं। लक्ष्यहरू एक-एक गर्दै पूरा भएको देख्दा हामीलाई धेरै आनन्द लाग्छ। कहिलेकाहीं हामी सँगै सभाको तयारी गर्छौं। त्यसपछि मन पर्ने खानेकुरा बनाएर खान्छौं।”
Text डिजिटल प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण जून २०१४